Warar Dheeraad ah oo ka soo Baxaya Weerarkii Ciidamada Maraykanka iyo Kuwa Soomaalida ay ku Qaadeen Deegaanka Toora-Toorow (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Wararka ka imaanaya deegaanka Toora-toorow oo ka tirsan Gobolka Shabellaha hoose, ayaa sheegaya in ciidamo isugu jiray Soomaali iyo Ajaanib maraykan ah ay weerar qorshaysan habeen hore ka qaadeen deegaanka Tooratoorow oo Saldhig ciidan u ah Ururka Al Shabaab siiba cutubka amniyaadka loo yaqaan.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in diyaarado Helicopter ah inay ku soo dageen duleedka deegaanka Tooratoorow, waxaana halkaasi ku soo daatay ciidamo Soomaali iyo Ajaanib isugu jiray, kuwaasi oo iyaga oo lugeynaya gudaha u soo galay Deegaanka.
Ciidamadaasi ayaa fuliyay howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen Deegaanka Tooratoorow, sida ay sheegayaan ilo wareedyo ku sugan deegaankaasi.
Lama oga waxa uu ahaa ama cida ay ku bartilmaameedsanayeen howlgalka ay fuliyeen ciidamada Cadaanka iyo kuwa Soomaalida ah, Lamana oga in halkaasi uu ka dhashay Khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira, balse waxaa la maqlayay rasaas iyo hubka noocyadiisa kala duwan ee ka dhaceyay nawaaxiga xarumaha Shabaabka ee Deegaanka Toora-toorow.
Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay inay fashiliyeen weerarka ciidamada Ajaanibta ah iyo kuwa Soomaalida ah ay ku soo qaadeenka deegaanka Tooratoorow.
Ciidamadan xulufada ah ayaa la aaminsan yahay inay howlgalka ka qaadeen deegaanka Leego ee Gobolka Shabellaha hoose oo Saldhig weyn ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ah ee sida gaarka ah u tababaran.